Black Magic: C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock Code မလိုပဲ Lock ဖြည်နည်း
C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock Code မလိုပဲ Lock ဖြည်နည်း
Posted by Black Magic | Posted in android , Ways For Android | Posted on 4:56 PM
အကိုကျွန်တော့ G 610 CDMA နဲ့ GSM နှစ်ကတ်သုံး b122firmware တင်လိုက်တာ network lockကျသွားလို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲနော်ကူညီပေးပါ ဆိုပြီး ကျနော်မေးလ်ထဲမှာလာမေးထားလို့ပါ။ သက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါနော် ။ ဒါလေးကတော.ကိုကျော်စွာသွင်ရဲ.လက်ရာကိုကျနော်ကလိထားတာလေးတွေပါခင်ဗျာ Huawei hacker tool လေးနဲ. C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Network Unlock Code မလိုပဲlockဖြည်လို.ရပါပြီခင်ဗျာ ပထမဆုံးလိုအပ်တာကိုယ်NETWORK UNLOCK ဖြည်မယ်.ဖုံးမှာ Rootလုပ်ထားဖို.လိုပါလိမ်.မယ် ဒုတိယအဆင်.က ဖုန်းမှာ usb debugging ,unknown source onပါ တတိယအဆင်.ကတော.ကွန်ပျူတာနဲ.usb connectလုပ်ပါ ကွန်ပျူတာမှာ adb driverသိသွားပြီဆိုရင် Huawei hacker toolkitကိုဖွင်.ပါ Bootloader/Network lock ဆိုတဲ.နေရာကိုသွားပါ Restore OEM_INFO ကိုနှိပ်ပါ Box တစ်ခုကျလာပါလိမ်.မယ် ကျနော်တင်ပေးထားတဲ.ထည်းက ကိုယ်ဖြည်မဲ.ဖုန်းနဲ.သက်ဆိုင်တဲ. IMAGEဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ဖုန်းက Restartကျပြီးပြန်တက်လာရင် 910,73,MEC ကိုယ်ကြိုက်ရာဆင်းကတ်ထည်.သုံးလို.ရပါပြီ ကျနော်စမ်းသပ်ပြီးသားပါ 100%အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ (Build numberတော.ရွေးတယ်နော်)Build Nunberတွေထည်.ပေးထားပါတယ် http://www.mediafire.com/download/2z44bpqcxvxq2tv/Huawei+Hacker+Toolkit.zip http://www.mediafire.com/download/bxvy1v67kx9aczp/network+unlock+for+huawei+c8813%2C8813d%2Cy300%2Cg610C00%282%29.7z
Credit to Android LuLin